Square dia mandefa fitaovana iray hampiasana amin'ny alàlan'ny Apple Pay | Vaovao IPhone
Square dia mandefa fitaovana iray hampiasana amin'ny alàlan'ny Apple Pay
Ny teknolojia Apple Pay dia mitohy mandroso haingana any Etazonia, noho ny antony niasana nandritra ny herintaona mahery tao amin'ny firenena ary tokony hiparitaka amin'ny ohatra, alohan'ny fanitarana iniana hatao amin'ny taona ho avy, ny fahitana an'i Espana amin'ireo firenena telo voafidy voalohany handray Apple Pay miaraka amin'ny fanampian'ny American Express.
Nanambara i Square tamin'ny fihaonamben'ny mpamorona farany fa miasa amin'ny fitaovana iray izay hamela fandoavam-bola ho an'ireo mpampiasa orinasa madinidinika rehetra amin'ny alàlan'ny Apple Pay alohan'ny faran'ny taona. Voalaza ary vita. Vao nanambara ny orinasa fa orinasa 100 eo ho eo efa ananany ity fitaovana ity Miaraka amin'izany, ho fanampin'ny fahafahany mandoa amin'ny alàlan'ny Apple Pay, amin'ny alàlan'ny fampidirana mpamaky karatra, izy ireo koa dia afaka mandoa vola amin'ny carte de crédit nentin-drazana misy tady maneta.
Nanamafy ny Kianja fa amin'izao fotoana izao dia afaka nizara fitaovana 100 fotsiny izy fa nandritra ny fanambarana tamin'ny fihaonambe farany natao ho an'ny mpamorona dia nanana fangatahana marobe izy ireo, ka tsy afaka manarona ny fitakiana rehetra izy ireo fa miasa manarona izany. Ity fitaovana ity 45 dolara ny vidiny Fahombiazana tanteraka io, saingy tahaka an'ity karazana fitaovana ity dia sarotra amintsika ny mahita azy ivelan'ny faritanin'i Amerika.
Miasa ity fitaovana ity bateria azo averina indray hiasa tsy misy tariby na amin'ny famatsian-herinaratra amin'ny alàlan'ny USB hisorohana ny olan'ny famatsiana herinaratra mandritra ny fampiasana. Ny Square dia misy puce NFC iray, handraisana ny fandoavam-bola, mpamaky ny andriamby ary mifanaraka amin'ny carte de crédit sy debit
Safidy iray mankany amin'ny Kianja ny PayAnywhere, izay nahavita fifanarahana tamin'i Apple hanandrana hanome izay ilain'ny orinasa kely. PayAnywhere dia misy ao amin'ny Apple Stores any Etazonia amin'ny vidiny $ 39,95 ary maimaim-poana ireo mpivarotra 5.000 voalohany ho an'ny mpivarotra, nefa tsy mila mandoa vaomiera any amin'i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Square dia mandefa fitaovana iray hampiasana amin'ny alàlan'ny Apple Pay
PowerMe dia mamela anao hameno ny iPhone amin'ny fitaovana Android